5 okwu vs. 5 Lies — njem Lee - Official Site
The ụzọ anyị na-eme a ozi na-adabere na onye ọ si. Ka m nye gị otu ihe atụ. Ọ bụrụ na onye ala ọzọ na-ejegharị ruo m n'okporo ámá na-ekwu, "Ka m gbaziri mkpịsị ugodi ala ụgbọ ala gị ezigbo ngwa. M chọrọ inwe ụfọdụ ego nke gị uwe aka igbe,"M ga-eleghị anya-ele ya anya dị ka ọ bụ crazy na-eje ije anya. Ma ọ bụrụ na nwunye m na-abịakwute m ma na-ekwu otu ihe, M ga-enye ya mkpịsị ugodi na-enweghị a abụọ echiche. Anyị na-ege ya ma mee ihe dị iche iche dabere n'onye na-ekwu okwu.
Olee banyere otu ihe dịruru ná njọ. Ọ bụrụ na m otu n'ime ezigbo ndị enyi ya asị m ga-edo ya zuru okè ikike ịchị ndụ m nile, M nwerela-ele ya anya dị ka ọ bụ crazy na-aga na-enweta ụfọdụ ndị enyi ọhụrụ. Na ọ ga-abụ ezi ka m ime otú. Ma ọ bụrụkwanụ na Chineke n'onwe Ya kwuru otu ihe?
2 Timothy 3:16 -ekwu, "Akwụkwọ Nsọ dum bụ Chineke pụta." Nke ahụ ọ bụghị dum amaokwu, ma ndị na ise okwu na-ekwu iji na-atụgharị uche na maka a ndụ. Eziokwu ahụ bụ na okwu nile nke Akwụkwọ Nsọ bụ okwu Chineke n'onwe Ya bụ ịrịba. Na m na-eche ndị na ise okwu, "Akwụkwọ Nsọ dum bụ Chineke pụta,"-Enyere anyị agha ụfọdụ n'ime ụgha na anyị na mgbe ụfọdụ kwenyere banyere Bible. Achọrọ m anya na ise.
1. N'ihi na Akwụkwọ Nsọ bụ Chineke pụta ọ bụghị: echiche
Ọtụtụ n'ime anyị na-emeso ndị Bible ka akwụkwọ jupụtara aro ma ọ bụ a collection of amamihe. Ọ ga-abụ ezi na-emeso ndị Bible n'ụzọ dị otú a ma ọ bụrụ na ọ bụ nanị a akwụkwọ nke ruturu na mmadụ chikọta. Anyị nwere ike tụgharịa site na a mata akụkụ na-amasị anyị. Ma ọ bụghị.
Chineke nwere ikike n'ebe ọ bụla dị ndụ mkpụrụ obi na mgbe Ọ na-enye iwu, ha na-abụghị aro. Ha na-na-adịghị echiche anyị nwere ike ịhọrọ ma ma ọ bụ denye aha na. Ọ dịghị Chineke "echiche." Ọ bụ Chineke. Ihe ọ bụla Ọ na-eche bụ eziokwu.
2. N'ihi na Akwụkwọ Nsọ bụ Chineke pụta ọ bụghị: bụzi ihe mgbe ochie
Ọtụtụ ndị taa na-ekwu banyere Bible dị ka otu agadi akwụkwọ na agadi echiche na anyị kwesịrị inwe gara aga. ha, ọ bụ mgbe iwe na ụfọdụ bara nnọọ rụrụ arụ. ndị ọzọ na-ekwu, "Ọ bụ agadi - enweta ihe i nwere ike si na ya, ma na-adịghị-ya gabiga ókè. "
Eziokwu Chineke adịghị ekubi ume. Chineke abụghị mmadụ onye na-enwe mmetụta ụfọdụ omenala ọnọdụ. Chineke si na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi. The Bible bụ agadi na e dere, na n'obodo dị iche iche, ma niile nke eziokwu dị nnọọ ka eziokwu taa. Ya mere, ọrụ anyị bụ ileghara stof nke na-adịghị "dabara anyị" ma ọ bụ na adabaghị ihe anyị na-eche bụ ime omume. Ọrụ anyị bụ ịgụ ihe Chineke kwuru, chepụta ihe ọ pụtara maka anyị, na-edo onwe ha ọ na-.
3. N'ihi na Akwụkwọ Nsọ bụ Chineke pụta ọ bụghị: dị nnọọ Ozi
Ụfọdụ n'ime anyị dị ka nkà mmụta okpukpe maka na-ezighị ezi. Anyị na-aga n'Akwụkwọ Nsọ nke anyị nwere ike ịmụta stof na-enwe ezigbo. Mgbe ị na-agụ Akwụkwọ Nsọ ọ bụghị ihe dị a akwụkwọ akụkọ ihe mere, ma ọ bụ dị nnọọ a akwụkwọ nke amamihe, ma ọ bụ nanị akwụkwọ akụkọ. Ọ bụ ihe ndị ahụ, ma ọ dịghị mgbe nanị ihe ndị ahụ. Mgbe ị na-anọdụ ala na Okwu, ị na-ezute na Chineke. Mgbe na-agụ Okwu Chineke na-enweghị na-eme eme na-ebute ụzọ gị n'obi. Chineke na-agwa. Listen.
4. N'ihi na Akwụkwọ Nsọ bụ Chineke pụta ọ bụghị: -agwụ ike
Echere m na nke a bụ ma eleghị anya na-eme mmehie anya na anyị nile anọwo na ikpe mara na ụfọdụ ebe. Anyị achọghị ịgụ Bible n'ihi na ọ dịghị n'ezie jidere anyị. Ọ na-adịghị na-uche anyị. Aga m na dị nnọọ ikwu otu ihe: Oleekwa otú ọ pụrụ ịgwụ ike ịhụ Chineke!? Ọ bụ ihe àmà nke ime mmehie anyị na uto buds. Ọ na-egosi na anyị nwere ndị na-amasị ihe niile na-adịghị mma na-.
Ka anyị ichegharị na, ntụkwasị obi Christ, na-uru nke ùgwù izute ya na Chineke.
5. N'ihi na Akwụkwọ Nsọ bụ Chineke pụta ọ bụghị: -adịghị ike
Okwu Chineke dị ike. Ọ bụ na Okwu ya na Ọ bụ ya kere eluigwe na ụwa. ọ si, “Ka ihe nke,” na e nwere. mgbe Jizọs, Chineke Ọkpara, wee Earth ike nke Okwu ya bụ na zuru ngosi. Mgbe O kwuru mmụọ ọjọọ Egwu jidere, ifufe na ebili mmiri gbaghachi azụ, ọrịa ọsọ, na ndị nwụrụ anwụ wee n'ọnwụ. Okwu Chineke bụ ndị sara dị ike.
Ọ bụ Okwu Chineke ka bụla n'ime anyị pụrụ-azọpụta. Chineke neji dị ike Okwu agbaji n'ime oyi nwụrụ anwụ obi na-enye ha anya ịhụ Jesus, bụ onye na-akpọlite ​​ndị nwụrụ Okwu Chineke. Ma ọ bụ site na nke a otu ihe ahụ Okwu nke Chineke na-aga n'ihu na-ekpughe onwe ya nye ayi.
The akwụkwọ na-anọdụ ka emetụta on your shelf bụ Okwu Chineke pụrụ ime ihe. Na nsọ, dị nsọ, ezi, na ndị sara dị ike.
Mgbe Chineke n'onwe Ya na-ekwu na ọ ga-agbanwe otú anyị ntị.
KdMeads • September 5, 2013 na 11:32 Abụ • zaghachi
Awesome! M mkpa karịa!
Latisha • September 5, 2013 na 11:34 Abụ • zaghachi
M n'ezie-amasị ya ịgụ a o nyeere m aka karịa ị maara. Thanks❤
Clarence • September 5, 2013 na 11:38 Abụ • zaghachi
Nke a post bụ nnọọ emetụ. Mere ka m ghọta uru nke Gods okwu na esi etinye ná ndụ m kwa ụbọchị. Nọgidenụ na-eme ezi ihe ahụ o etinye na ndụ gị Njem!!!
ịkụ gọlfụ • September 5, 2013 na 11:44 Abụ • zaghachi
OMG! Nke abụọ na-ekwu bụ kpọmkwem ihe Jehova na-ejere m banyere nke a n'ehihie.. Na-eto Chineke n'ihi na ihe mkpughe! Nke a bụ oké post nwere ike n'aha Jehova otuto..
Rosalinda • September 5, 2013 na 11:53 Abụ • zaghachi
Nke a bụ ihe kasị enye ume ọhụrụ ihe m na-agụ ụbọchị nile. Thnx n'ihi ịbụ a ìhè n'ụwa na-enye Chineke otuto!!
Shauneil • September 5, 2013 na 12:08 pm • zaghachi
Zuru okè nkọwa nke okwu Chineke na otú ọ na-emetụta ndụ anyị.
Jerome • September 5, 2013 na 1:56 pm • zaghachi
BoomSauce! -Amasị m ya ọtụtụ dị egwu! Nnọọ kwesịrị ekwesị na n'ụzọ doro anya kwuru,… The “All nke Akwụkwọ Nsọ”
Tony kachule • September 5, 2013 na 2:08 pm • zaghachi
Enwere m nweta ọtụtụ uche na ihe ị sịwo,Chineke ka otuto,m ọ na-agwa ihe!!
aha: 5 okwu vs 5 Lies …site Njem Lee | Bro. Jerome
Athenkosi Nogcinisa • September 5, 2013 na 2:12 pm • zaghachi
Ezigbo Njem Lee
Okwu ndị ahụ n'ezie gwara m okwu n'ihi na dị nnọọ na mbụ na m anya na m Bible, “ọ bụ agadi” na “Ka m ga-n'ezie na-agụ ya?”.Nke a blog gbanwewo n'ezie otú m si ele m bible.God-agọzi gị, Ekele dịrị Gị
kebron • September 5, 2013 na 2:40 pm • zaghachi
egwu! a n'ezie gọzie m. ekele maka doin ihe ị na-eme :)
CodyMcCracken • September 5, 2013 na 4:08 pm • zaghachi
Nke ahụ bụ eziokwu na akụrisị ntụpọ!! Onye ọ bụla kwesịrị ozi na-eweghara ụfọdụ on ha na mkpịsị ụkwụ.
Joel • September 5, 2013 na 5:13 pm • zaghachi
dị ka a 19 yr ochie okorobịa na, M na-eche dị u kọrọ na m ọgbọ.
Dị nnọọ chọrọ ikwu, M ịghọta ihe Ua na-eme.. na Ua nanị Ihọd na m nwere ike ige ntị ozi ihe dị ka 1hr-enweghị blinking! I wanna-anụ ihe nke Ua okwuchukwu elu a na saịtị plz!
Debbie • September 5, 2013 na 9:46 pm • zaghachi
M na-ege ntị.
Jessica • September 5, 2013 na 9:48 pm • zaghachi
Amen! Ya mere Ezi m nnọọ ịhụnanya a blog! ekele gị nke ukwuu maka nke a nghọta, gbaakwa ha ume! :-)
CherishJesusLuv • September 5, 2013 na 11:33 pm • zaghachi
Nke a Blog nọgidere nnọọ na-mma.
My Bible abụghị na adị m nọ Ezekiel 24. M na-agụ ogologo tụbara. Ma ọ dịtụbeghị mgbe m na-agụ ihe ọ bụla dị ka nke a….The ụzọ ọ kọwara Jerusalem bụ crazy. M nwere ike fọrọ nke nta na-eche Chineke mgbu tụbara ibuot emi dị ka Ọ na-akọwa a Ikpe.
Limon • December 9, 2014 na 11:08 Abụ • zaghachi
Chaị m ga-ekwupụta na ị na-eme ka ụfọdụ dị treanhnct ihe.
ReneeB • September 6, 2013 na 9:00 Abụ • zaghachi
n'ezie?! Nke a bụ egwu!!! Mgbe ị ga-eche na ị na-agaghị na-eme ezu ma ọ bụ si ezu na ndụ gị.. Dị na-echeta ihe O mere ka i si na ị ga ngwa ngwa hụ ihe O meere, na-eme.. Ọ na-eji gị otú dị ike!!! Daalụ maka ihe niile ị na-eme, ọ na-enye olileanya!!!!!!
Omario. • September 6, 2013 na 1:53 pm • zaghachi
Ka okwu nile ọ bụla, -eji ma tụgharịa uche n'elu n'atụghị egwu na njikere,
Otú ahụ ka sonship na ike nwere ike-ekpughe n'elu Anyị bụ ndị mmụọ nsọ na Jesus Christ Name.
ollilovely • September 6, 2013 na 2:12 pm • zaghachi
Daalụ maka ekere òkè n'okwu ndị a nke amamihe! -Echetara m nkwa o kwere ya na-adịghị nnọọ obi di ya mma okwu ma ọ bụ egwu na-agba ume ruturu… ha bụ otú ọtụtụ ihe ndị ọzọ…ha na-na eziokwu Chineke nyeré ndụ anyị. #Ahụrụ m ya n'anya!
Tonu Jehova maka enweghi ngwụcha amamihe na ịhụnanya si apụta ìhè site nsọ Ya Okwu. Na ekele gị na ị uche Ya Mmụọ. M olileanya na m art ga-eru ndị mmadụ n'otu ụbọchị ụzọ gị na-eme! -ekwusa ozi ọma, Bro!
aha: ngụda- Day 9: Nkwa Ya bụ Real! | ollilovely
Wayne Miller • September 6, 2013 na 6:34 pm • zaghachi
M na-ekele Chineke maka mmanụ ahụ o tere o ebe na ndụ gị o hụrụ n'anya na blog na-atụ anya na-agụ ihe. Chineke n'ezie gọzie amamihe na i nwere
Terran • September 6, 2013 na 11:47 pm • zaghachi
njem, nke ahụ bụ ihe m na-eche anyị niile ndibiat karịsịa mgbe na ọkụ na-anwụ anwụ ala. M na-ahụ ụfọdụ na-ahụ akwụkwọ ndị o dere ọzọ dere ya na-enye ha ziri ezi nke Akwụkwọ Nsọ ma na-echefu na Bible bụ na Chineke kunyere. Mgbe niile na-Bible dị ka ikike ka elu!
aha: Saturday Tie mkpu-outs: Kansas City, fir Bluff, & Ministry Links | H.B. Charles Obere.
JosephBonacci • September 7, 2013 na 12:15 pm • zaghachi
mara mma. Chineke’ okwu anaghị agbanwe agbanwe. Ọ bụ otu taa dị ka ọ bụ ọtụtụ puku afọ gara aga na ka ga na-ezi ọtụtụ puku afọ site ugbu a. Man hụrụ n'anya na-agbanwe, mgbanwe, akọwahie, ma jikwaa ya maka nzube ya. agụ ya, -amụ ya, -ebi ya. -Abụ onye na okwu. Identityfulfilled.com
Altruism • September 9, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
Ya mere Bible ji na bụghị ka kor'an / Bhagavad Gita / Talmud / wdg.?
Shelby • September 10, 2013 na 1:54 Abụ • zaghachi
M ike ịkọwa otú m mkpa a, na obi dị m ụtọ na ị ntị olu Chineke ka a na ozi a e dere. Daalụ!
David Williams • September 11, 2013 na 1:15 Abụ • zaghachi
Walker • September 11, 2013 na 10:55 Abụ • zaghachi
“-eme mmehie tastebuds,” M hụrụ n'anya na. Ọ bụ nnọọ eziokwu. M na-Okwu na-ada n'ụra. Nke ahụ bụ egwu. M mkpa ichegharị ma rịọ Chineke na-emeghe anya m na-egbo m, dị ka ọbụ abụ. Na-ede na-ejere Njem, ọ dị mma stof. -Agba nnọọ ume ma na ala n'ụwa.
Chelsea • September 26, 2013 na 8:56 Abụ • zaghachi
CHAỊ. Ọ bụla otu onye n'ime isi ihe ndị ziri ezi on ma nye m ọhụrụ n'ọnọdụ nke Bible. Daalụ maka ikwu eziokwu nke Chineke. Ọ na-toughing ndụ nke ọtụtụ.
Victoria • October 26, 2013 na 7:37 pm • zaghachi
Nke a bụ ihe dị m mkpa ,
aha: 5 echiche (ụgha) on Okwu Chineke | Ana m amụ Baịbụl